Website-yada Puntland Ceeb Alaa idin Badey – SHAMEON YOU
Home Opinion Website-yada Puntland Ceeb Alaa idin Badey – SHAMEON YOU
Garoowe, Monday 24 December 2012. Waxaa arin aad looga sariigta ah in inta badan Websiteyada ka howlgala Puntland aysan ayaamahan ka soo waramin xaalada dhabta ah ee ka jirta Puntland. Waxaa ayaamahan socda arimo aad u karkaraya oo ku saabsan kala guurka siyaasadeed ee Puntland. Waxaa jira dad badan oo iskugu jira nabadoono iyo waxgarad lagu xirxirayo Garowe.
Sidoo kale in badan oo ka mid ah Waxgaradka looba diidan yahay in ay magaalada Garoowe cagta soo dhigaan.
Waxaa kaloo la xaqiijiyey in Xukuumada Puntland ay amar ku siisey hoteeladii sida shaqsiga ahaa loo lahaa in aan laga kireynin dada ka imaanaya magaalada bannaankeeda oo aysan dowladu u fasaxin in ay Garoowe soo galaan. Websiteyada Puntland waxaa kaloo ay ka aamusan yihiin dhaqdhaqaaqyo farabadan oo ay sameynayaan siyaasiyiinta Puntland inta dalka jooga iyo inta dibadaba ku maqan oo ah bal sidii xal looga gaari lahaa xaaladan cakiran ee ka aloosan Puntalnd.
Maxaa hadaba aamusiyey inta badan ee Websiyteyada ka soo warama Puntland? Ma amar ayey iyaguna ka qaateen xukuumada Puntland mise sidooda ayey raali uga yihiin in xaqdarooyinkaas faraha badan ay ka socdaan Puntland ilaa ay isku qarxeyso?
Mise waxaaba suurtagal ah in aysan dareensaneyn mas’uuliyada ammaano ee ka saaran in ay dhabta iyo xaqiiqada ka jirta dhulkii ay soo bandhigaan?
Mida ugu xanuunka badan oo aysan inta badan websiteyada Puntland kaba warami soona hadal qaadin waa dulmiga loo geysanayo Cabdi Kaafi Maxamed Xasan oo ahaa Agaasime ku xigeenkii hore ee Hay’ada Daryeelka Bulshada Puntland oo markii labaad si sharci daro ah ku xiran isagoon maxkamad la soo taagin in ka badan 48 saacadood.
Cabdi Kaafi oo lagu xirey fikirkiisa siyaasadeed iyo in uu soo dhoweeyey ergooyinka Garoowe imaanaya iyo weliba in uu yahay dadka u dhashey Garoowe ee ka madax bannaan Faroole iyo Caruurtiisaba.
Waxaa ceebta ugu weyn ay ku muteysanayaan Websiteyada Puntland in ay qariyaan xarigaa xanuunka badan ee Cabdi Kaafi oo ah nin indhoole ah, jirran oo qaba cudurka kaadi-macaanka (sokorowga) iyo dhiig karka ilaa iyo ayaamihii ugu danbeeyeyna ka soomanaa cunada iyo cabitaankaba isagoo ka gilgilanaya dulmiga loo geysanayo.
Maamulayaasha websiteyada Puntland ma laha miyaa jir bani’aadamnimo danqada oo arintaa murugada eh xitaa ku dhici waayey in ay soo weriyaan? Ma waxey sugayaan in haddii qof sidaa u jiran oo sokorowga qaba uusan in yar xitaa cunno la’aan ahaan karin ay tii Alla u timaado in xitaa ay geeridiisa qariyaan? Maamulayaasha websideyada Puntland-now ogaada in aad denbigaas wax ku leedihiin aad qarineysaan dulmigaas dunida oo dhan iyo dadka reer Puntlandna ay idinkula xisaabtami doonaan. Shame on you.
Abdirisaq Aw Abdi, Concerned Puntlander. ,abdirisaqawabdi@gmail.com